Sida looga ilaaliyo telefoonkaaga wireless-ka tuugada internetka | Laga soo bilaabo Linux
Sidee looga ilaaliyaa taleefankaaga wireless-ka tuugada
Isaac | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Haddii cudurka SARS-CoV-2 faafitaanku kugu kallifay inaad ka wada hadashid guriga, ama haddii aad si fudud u rabto inaad ku dareento xasilloonida gurigaaga ama xafiiskaaga, waa inaad ogaataa taas ka taleefannada gacanta iyo VoIP waxay bartilmaameed u yihiin dambiilayaal badan oo internetka doonaya inay weeraraan meheradaha ama shakhsiyaadka.
Maskaxda ku hay in a cyberattack wuxuu u horseedi karaa khasaaro weyn ganacsiga, iyo sidoo kale soo daadashada macluumaadka xasaasiga ah ee shirkadda lafteeda ama macaamiisha. Sidaa darteed, si looga hortago inay dhageystaan ​​sheekooyinkaaga, waa inaad raacdaa talo wax ku ool ah oo aad adigu iskaa u adeegsan karto.
2 Marka taleefanka aan xadhkaha lahayn ma nabdoon yahay?
3 Sida looga ilaaliyo taleefankaaga weerarada wireless-ka
3.1 Tallaabooyin gaar ah oo loogu talagalay telefoonnada VoIP
4 Tallaabooyin kale oo dheeri ah
Kuwii hore khadka taleefanka guryaha weli waxay ku nool yihiin goobo badan oo ganacsi iyo guryo ah, in kasta oo si tartiib tartiib ah loogu beddelay telefoonka gacanta iyo VoIP. In kasta oo ay da 'yar yihiin, haddana wali waxay ka mid yihiin hababka ugu xasiloon uguna wanaagsan ee isgaarsiinta wicitaannada masaafada dheer.
Si kastaba ha noqotee, telefoon go'an sidoo kale way isbedeshay waxoogaa yar tobanaankii sano ee la soo dhaafay. Laga soo bilaabo taleefannadii hore ilaa taleefanka aan xadhkaha lahayn ee hadda jira. Tikniyoolajiyadda bilaa xadhiggu way sii jaban tahay oo way bislaaneysaa illaa ay ka guuleysato inay ka rarto taleefanka caadiga ah.
Taleefanka cusub ee bilaa xadhiga ah adiga iska ilaali xadidaada xadhkaha, inaad awoodid inaad udhaqaaqdo halkaad ubaahantahay intaad wicitaanka sameyneyso, ilaa intaad kujirto caynsanaanta tiknoolajiyada wireless-ka ee la isticmaalay.
Khadadka duugga ah ee duugga ah ayaa dhageysi laga heli karaa iyadoo la dhageysanayo taleefannada, laakiin sidoo kale waxaa lagu sameyn karaa xargaha casriga ah iyo fiilooyinka VoIP. In kasta oo ay run tahay in taleefanka aan xadhkaha lahayn ee hadda socdaa uu ka baxay isticmaalkiisii Mowjadaha raadiyaha AM laga sii daayo banaanka iyo ilaalin la'aan (waa la kala dhex geli karaa) xitaa isgaarsiinta oo leh teknolojiyad dijitaal ah oo qarsoodi ah si looga ilaaliyo dhagaha.
Marka taleefanka aan xadhkaha lahayn ma nabdoon yahay?
Ma jiraan waxba 100% ma hubo, dambiilayaasha internetka ayaa hela dayacanka cusub iyo noocyada weerarada si ay u fuliyaan weerarada. Sidoo kale, waxay kuxirantahay tikniyoolajiyadda taleefankaaga wireless-ka ah uu adeegsado, way sahlanaan kartaa ama ka fududtahay in la dhexgalo wadahadalka.
Haddii taleefanka aan xadhkaha lahayn ee aad haysato aanu caddayn inuu leeyahay tiknoolaji DDS (Digital Spread Spectrum) ama DECT (Teknoolojiyad Dhex Dhexaad leh oo Dhexdhexaad ah), markaa waxaad ku wareejineysaa tikniyoolajiyadda analogga ah (xitaa haddii ay yihiin fiilo la'aan).
Haddii aad tahay analog, waxaad horjoogi doontaa taleefannada gacanta ugu nugul. Halka kuwa dhijitaalka ahi xoogaa ka amni badan yihiin, laakiin iyagu gebi ahaanba xor kama ahan weerarada ay dhinacyada saddexaad dhegeysan karaan wadahadalka aad la leedahay. Qaar ka mid ah dambiilayaasha iyo dambiileyaasha internetka ayaa ku guuleystey inay dhexda u xirtaan wadahadalka 'DECT-encrypted' sida kan ay isticmaalaan qaar ka mid ah soo saarayaasha taleefanka gacanta ee maanta.
Si aad u awood u yeelatid inaad dhexda ka xirto wadahadalka, weeraryahannadu waxay u baahan doonaan oo keliya software iyo qalab gaar ah. Intaa waxaa dheer, qalabka softiweerku waa il furan oo bilaash ah, sidaa darteed ma adka in la helo waxaad u baahan tahay basaasnimo. In kasta oo qalabka lagama maarmaanka ahi u gudbo si fudud isagoo haysta kombiyuutar leh kaar shabakad wireless oo gaar ah oo loogu talagalay DECT (nasiib wanaag ma sahlana in la helo ama raqiis ah).
Maanta DECT waxay u horumaraysaa sidii loo hirgelin lahaa tallaabooyin nabadgelyo oo cusub heer ahaan si looga dhigo mid ammaan ah. Laakiin maahan in dhammaan taleefannada gacanta ay qaataan, sidaa darteed waxaa jiri kara moodallo badan oo nugul.
Sida looga ilaaliyo taleefankaaga weerarada wireless-ka
Caadi ahaan, illaa shirkaddaadu wax ka qabato mooyee gaar ahaan macluumaad qiimo lehFaa'iido malahan in la iibsado qalabka lagama maarmaanka u ah basaasidda bartilmaameedyada qaarkood. Laakiin taasi yaanay kaa dhigin inaad ku nasato, maadaama mar haddii dambiile dambiile ahi haysto maaddada loo baahan yahay, waxay u isticmaali karaan qaar badan oo ka mid ah dhibbanayaashooda.
Faa'iidada kale ee noocan ah tiknoolajiyada ayaa ah in la dhexgalo xogta isgaarsiinta DECT waxaa lagama maarmaan u ah dambiilaha internetka tan xigta xarumaha aad ku rakibtay telefoonka wireless-ka. Waxa ugu fiican ayaa ah in kala duwanaanta caynsanaanta kuwani aysan aad u ballaaranayn, sidaa darteed way ka sii dhib badan tahay qabashada calaamadda.
Iyadoo taasi jirto, xoogaa talo ah inaad maskaxda ku hayso waa:
Haddii aad haysatid taleefan aan xadhig lahayn oo analog ah, u beddelo DECT aad u ammaan badan. Haddii aad tahay qof aan fiicnayn, si fiican u isticmaal taleefan xadhig leh wicitaanada ugu xasaasisan ama mid sir ah oo loo yaqaan 'VoIP one'.
Xafiis weyn ama guri, taleefanka dhig dhexda dhismaha. Taasi waxay adkeyneysaa in la joojiyo calaamadaha. Marna waa inuusan u dhawaanin derbi leh guri ku dhow, ama ku dhow derbiyada dibadda ee dhismaha.
Tallaabooyin gaar ah oo loogu talagalay telefoonnada VoIP
ka Telefoonada VoIP Waxay u adeegsadaan borotokoolka internetka ee IP-ga inay ku fuliyaan isgaarsiinta, halkii ay ka isticmaali lahaayeen fiilooyinka caadiga ah ee taleefannada sida kuwa soo jireenka ah. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la hirgeliyo tallaabooyin kale oo kala duwan si loo isku dayo hagaajinta amniga shabakaddaada:
Isticmaalka router leh VPN si uu uqariyo dhammaan taraafikada shabakadda waxay noqon kartaa ikhtiyaar weyn si loo ilaaliyo isgaarsiinta VoIP.
VLAN gooni ah ayaa loo isticmaali karaa telefoonka taleefanka shabakadda aad u adeegsato daalacashada.
Maalgeli shirkadaha amniga internetka ee ka sameyn kara hanti dhowrka amniga shabakaddaada si aad u xoojiso daciifnimo kasta oo jiri karta.
Tababar shaqaalahaaga, maxaa yeelay marka nidaamku aamin yahay, sida ugu wanaagsan ee aad ku heli karto waxa aad rabto waa inaad u aaddaa xiriirka ugu liita: isticmaalaha.
Tallaabooyin kale oo dheeri ah
Muhiim ma aha oo kaliya in la ilaaliyo qalabka, sidoo kale waa muhiim ilaaliyo tallaabooyinka amniga shaqaalahaaga iyo naftaada xafiiska. Sidaa darteed, waxaa lagugula talin lahaa inaad ixtiraamto tallaabooyin taxane ah oo dheeri ah illaa iyo inta aysan jirin tallaal wax ku ool ah ama daaweyn ka dhan ah Covid-19. Tallaabooyinkan aasaasiga ahi waxay marayaan:
Joogtee masaafada badbaadada ee 2 mitir u dhexeysa dadka iskana ilaali dadka badan.
Xidho indho-shareer la oggolaaday mar kasta oo aad gudaha kula shaqeyneyso dad badan ama dibedda haddii masaafada amniga aan la ilaalin karin.
Gacmo-dhaqashada iyo jeermiska dushiisa.
Isticmaalka shaashadda difaaca, galoofyada, iyo waxyaabo kale haddii loo baahdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sidee looga ilaaliyaa taleefankaaga wireless-ka tuugada
samee Sannadka 1
Waa wax cajiiba sida wax kasta oo ku lug leh internetka ay u nuglaan karaan, waxaa la ogyahay in sannadkan ay jireen weeraro kala duwan oo lagu qaaday goobo kala duwan oo dijitaal ah. Iskusoo wada duuboo, lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' waa kuwa ugu badan weerartay sanadkan, laakiin tani micnaheedu maahan inaysan gudbinaynin amniga iyo hufnaanta. Hagaag uguyaraan taasi waa waxa ay ii gudbiso madal cryptocurrency ah https://www.mintme.com
Ku jawaab Denver
Maxaa ku cusub Mozilla Thunderbird 78.3.1
Nooca cusub ee nidaamka faylalka ee IPFS 0.7 oo baahsan ayaa la heli karaa